MIUI Tip #Automated Tasks – Xiaomi Guide
MIUI Tip #Automated Tasks
Published March 16, 2018 by Thet Zaw Ko
MIUI ROM မှာပါလာတဲ့ Feature တွေထဲက ဖုန်းကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ အလုပ်လေးတွေ အလိုအလျောက်လုပ်ပေးနေဖို့ ထိန်းကျောင်းအသုံးချတာလေးတွေပါ။ နိဒါန်းရှည်ရှည်မသွားတော့ပဲ ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်..။
ဖုန်းကို မိမိလိုချင်တဲ့အချိန် အလိုလို Power ပိတ်အောင်၊ အလိုလို Power ပိတ်အောင် Timer ပေးထားတဲ့သဘောပါ။ Alarm ပေးသလိုပေါ့။ တစ်ခါစာပဲလုပ်ထားမလား.. ရတယ်။ နေ့တိုင်းလို အလိုလိုလုပ်ပေးနေအောင် လုပ်ထားမလား.. ရတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတွေပါ။ ကိုယ့်နေထိုင်မှုအကျင့်ပေါ်မူတည်လို့ ည ၁၁ နာရီအိပ်တယ်။ ၁၂ နာရီမှာ အလိုလိုပိတ်သွားအောင်လုပ်ထားလိုက်မယ်။ မနက် ၆ နာရီမှာထဖို့ Alarm ပေးထားတယ်။ သည်တော့ ၅ နာရီမှာ အလိုလို power ပြန်ပွင့်အောင် ထားထားပေးမယ်.. စသည်ဖြင့် လိုသလိုအသုံးချတာပါ။ ဖုန်းကိုလဲ အနားပေးရာရောက်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကိုလည်း အနားပေးရာရောက်တယ်။ ဖုန်းကို လုံးဝပိတ်ထားပြိးမှ ပြန်ဖွင့်သုံးတာမျိုးဖြစ်လို့ မလိုအပ်တဲ့ cache တွေရှင်းလင်းစေပြိးသားလိုလဲဖြစ်တယ်.. အသုံးပြုလို့လဲကောင်းစေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ.. 😀
အဲသည် Timer တွေပေးဖို့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းဝင်သွားလိုက်ပါ။
Battery Settings ထဲဝင်တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ပါပြီခင်ဗျာ.. တစ်ခုချင်းစီ အလုပ်လုပ်မယ့် သဘာဝလေးတွေ လေ့လာသွားတာပေါ့။ Auto Power ON/OFF က နောက်ဆုံးမှာလာပါမယ်။ ကျန်တာလေးတွေလဲ သဘာ၀ သိထားသင့်တယ်လေ.. 😀
ကတော့ Mobile data ဖွင့်ထားသုံးနေမယ်။ သည်တိုင်းထားရင်း Screen off သွားပြီး lock ဖြစ်သွားရင် Mobile data ကို ဘယ်နှမိနစ်ကြာရင် အလိုလို OFF ပါဆိုတာမျိုး ထားလို့ရတာပါ။ အဲသည် 1 နေရာနှိပ်ရင် ထားလို့ရတာတွေက Screen ပိတ်သွားပြီး ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ် ၃၀ မိနစ် ကြာရင် အလိုလိုပိတ်ပါမယ်ဆိုတာရွေးပေးနိုင်ပါတယ်။ Never ကတော့ ဘယ်တော့မှမပိတ်ဘူးပေါ့။ သည်တော့ မိမိက Mobile Data နဲ့ download တွေလုပ်ထားတယ်။ ကြာမှာမို့ ဖုန်းကို သည်တိုင်းပဲထားထားတယ်။ ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်တွေ ရွေးထားရင် သူက Mobile Data ကို OFF လိုက်မှာပါ။ သည်တော့ download ဆက်မသွားတော့ဘူးပေါ့။ Screen Lock ပြန်ဖွင့်ချိန်မှပဲ Mobile data ပြန်တက်ပြီး ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုသဘာဝရှိပါတယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံထားပြိး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Default ကတော့ Never ပါပဲ။
ကတော့ Screen off ပြီး Lock ဖြစ်ချိန်မှာ Background cache တွေ clear လုပ်ဖို့ အချိန်မှတ်ချင်မှတ်ပေးထားတာပါ။ နံပါတ် တစ် လိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်သလို အချိန်လေးတွေ ထားနိုင်ပါတယ်။ Default ကတော့ Never ပါပဲ။ သည်နေရာမှာ Cache ကို Auto Clean တာလဲကောင်းပါတယ်။ Memory ပိုထွက်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ effect က MX Player လိုမျိုးနဲ့ MTV Video တွေကို Background Play ထားလိုက်တယ်။ သည်တိုင်း နားကျပ်နဲ့နားထောင်ရင်း screen off ထားတယ်။ သည်နေရာမှာ ရှင်းဖို့လုပ်ထားရင် ရှင်းလိုက်မှာပါ။ အဲသည်အချိန် MX Player က သီချင်းရပ်သွားတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်သည်ပေါ့။ အဲလို Effect ရှိတတ်ပါတယ်။ သည်တော့ Clean ချင်တယ်။ MX လိုမျိုးနဲ့ Effect မဖြစ်ချင်ရင် MX Player ကို Screen မ off ခင် Recent list ထဲမှာ Lock လုပ်ခဲ့ပေးပေါ့။ အဲဒါက Home key ဘယ်ဖက်က Recent key ကိုကြာကြာနှိပ်ထား။ MX Player icon or preview ကို ဖိပြီး အောက်ဆွဲချ.. Lock ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ Clear မဖြစ်တော့ပါ။ နောင် Lock ပြန်ဖြုတ်ချင် ခုန lock သလိုဝင်ပြီး အောက်ဖက်သာတစ်ချက်ပြန်ဆွဲချ။ Normal လိုဖြစ်သွားပါတယ်။
အထက်ပုံလေးကိုဆက်ရှင်းရရင် သည် နံပါတ် ၁ က ကိုယ့်ဖုန်းထဲက ဘယ် app တွေက ဘက်ထရီကို အရမ်းသုံးနေတယ်ဆိုတာ Noti Bar မှာ လာပြပေးတာပါ။ ကိုယ်က တကယ် app ဖွင့်ပြီး heavy သုံးနေတာမျိုးဆိုလဲ ကိုယ်သုံးနေတာပဲလေ. ဟုတ်မှာပေါ့ဆိုပြီး ထားချင်ထားပေါ့။ ကိုယ်တစ်ခါတလေလောက်မှသုံးတာက လာပြနေရင်တော့ အဲသည် app ကို ကိုယ့်လိုအပ်ချက်အရ Background run ပိတ်ပေးသင့် ပိတ်ပေးရမှာပေါ့။ ဖြစ်လေ့ရှိတာကတော့ ကိုယ့်ဖုန်း android နဲ့မကိုက်တဲ့၊ Play Store ကနေဒေါင်းထည့်ထားတာမဟုတ်တဲ့ သူများဆီက အလွယ်ကူးထည့်ထားတဲ့ app တွေကပဲ သည်လိုမျိုးဖြစ်လေ့ရှိတာပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ Android api တွေနဲ့မကိုက်တော့ သူ့ပုံမှန်လို အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ အဲသည် Effect တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ Basic idea ကတော့ app ထည့်သွင်းသုံးချင်ရင် Google Play Store ကနေသာ ထည့်သုံးပါပေါ့။
သည် ၂ ကတော့ အလိုလို Power ဖွင့်ခိုင်းမယ်၊ ပိတ်ခိုင်းမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖွင့်တာ ပိတ်တာ လုပ်စေမယ်ဆိုတဲ့ Time လေးတွေ သတ်မှတ်ပေးထားဖို့ပါ။ သူ့ကိုနှိပ်ဝင်ရင် သည်လိုတွေ့မှာပါ။ Default ကကတော့ ON / OFF Timer တွေ OFF နေတာပါပဲ။
ကိုယ်က ဖုန်းပိတ်တာ မိမိဖာသာလုပ်မယ်။ ပွင့်တာပဲ Auto ပွင့်ချင်ရင် POWER ON TIME နေရာမှာပဲ လိုသလိုထားပေါ့။ အဲလိုပါပဲ မိမိဖာသာ ပြန်ဖွင့်ချင်တဲ့အချိန် ဖွင့်မယ်။ ပိတ်တာတော့ အလိုလိုပိတ်ပေးဆို POWER OFF TIME နေရာ လိုသလိုချိန်ပေါ့။ သူ့ဟာသူ အလိုလို ပိတ် ဖွင့် လုပ်စေချင်ရင်တော့ နှစ်ခုစလုံးချိန်ပေါ့။ လိုချင်တာအတွက် အရင်ဆုံးတော့ ON, ပြီးရင် အချိန်ရွေးပေးပေါ့။ Repeat နေရာမှာတော့ အခုလိုလုပ်တာက တစ်ကြိမ်စာ အတွက်လား။ နေ့တိုင်းလား။ Mon to Fri working days တွေမှာပဲအတွက်လား.. စသည်ဖြင့် Repeat ထဲမှာ ရွေးပေးထားနိုင်ပါတယ်။
အချို့တွေမေးလေ့ရှိတဲ့ ဖုန်းက ညဆို သုံးနေရင်း အလိုလိုပိတ်သွားတယ်။ ပြန်ဖွင့်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးက သည်နေရာကို ကိုယ်ကလိထားတာ မေ့နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်စစ်ပေါ့။
နံပါတ် ၃ ကတော့ ဘက်ထရီ icon လေးကို ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာပါ။ ပုံလေးပေါ့။ အဲသည်နေရာနှိပ်ရင် ရွေးချယ်စရာပေါ်ပါမယ်။ Default ကတော့ မြင်နေကြအတိုင်း Graphical ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဘက်ထရီတုံးပုံရယ် % ရယ်ပါပြပေးတဲ့ Percent and Graphical ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဘာမှမပြပဲ ထပ်ဆုံးမှာလဲ မျဉ်းတန်းနဲ့ပြပေးတဲ့ Top Bar ပါ။ အားအနဲအများရ ဘယ်ကနေစလို့ ညထိ အတိုအရှည် ဖြစ်ပါမယ်။ အနီ အဝါ အစိမ်းရောင်နဲ့ မျဉ်းတန်းလေးမြင်ရမှာပါ။ နောက်တစ်ခုက Percent Only ပဲပြတာရယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘာ Sign မှမပြခိုင်းပဲ ထားတာပါ။ အားကုန်ခါနီး 20% ဆိုရင်တော့ LED အနီပြတာမြင်မှာပေါ့.. စသည်ဖြင့် ဘက်ထရီ အမြင်လေးကို လိုသလိုလေးထားတာပါ။
ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ အလိုလိုအလုပ်လုပ်ဖို့ အချက်ကလေးတွေ လုပ်ထားနိုင်တာလေးတွေ သိပြီးရင်တော့ အခြား အလုပ်လုပ်ဖို့ Task လေးတွေ မိမိသာ သတ်မှတ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခုနပြောတာတွေက လိုသလို ON / OFF တာတွေပါ။ အခုဟာကတော့ သတ်သတ် task အသစ်တွေ သတ်မှတ်ထည့်တာပါ။ ပုံမှာပါသလို အောက်ဆုံးက Automated Tasks နေရာ နှိပ်ဝင်ပြီးလုပ်တာပါ။
နှိပ်ဝင်လိုက်ရင် Default ထည့်ပေးလိုက်တာလေးအချို့တွေ့ရသလို + Sign လေးနှိပ်ပြီး မိမိဖာသာ သတ်မှတ်ပေးတာလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Task တွေကို ON/OFF လိုသလို လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ညာဖက်အစွန်က Switch က ON/OFF ပါ။ Task အလယ်လောက်နှိပ်ရင် အဲသည် Task ကို လိုသလို Setting ချတာပါ။
Auto အလုပ်လုပ်ခိုင်းချင်တဲ့ Task တစ်ခုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အဲသည် Task အတွက် နာမည်၊ ဘယ်အခြေအနေမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Condition၊ ဘာတွေလုပ်ပါဆိုတဲ့ Action.. သည်သုံးခုသတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။
Condition ဆိုတဲ့ အခြေအနေက သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
Timer ဆိုတာက Alarm ပေးသလိုပါ။ ဘယ်အချိန်ရောက်ရင် ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတာတွေ လုပ်ပါဆိုတာပါ။
When battery reachesacertain level က ဘက်ထရီ % ဘယ်လောက်ရောက်ရင် သည်အလုပ်တွေလုပ်ပါလို့ သတ်မှတ်ပေးတာပါ။
Set Time က ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိ သည်အလုပ်ကိုလုပ်ထားပေးပါဆိုလိုတာပါ။
Action ကတော့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခြေအနေရောက်ရင် ဒါတွေလုပ်ပါလို့ ခိုင်းထားတာတွေပါ။
ကဲ.. နမူနာ တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာ.. Task Name ကို All Rest လို့ထားမယ်ဗျာ.. 😀 😀 လုပ်ချင်တာက နေ့တိုင်း ည ၁၁ နာရီရောက်တိုင်း Airplane mode ON ထားလိုက်မယ်။ Recent တွေ Clean ထားလိုက်မယ်ပေါ့။ ပြီးရင် နောက်တစ်ခုက မနက်5နာရီထိုးတာနဲ့ အရင်ဆုံး Airplane mode ပြန် OFF မယ်။ အဲလိုမှ ဖုန်းလိုင်းတက်မယ်။ ပြီးရင် Mobile Data ON ခိုင်းမယ်။ ပြီးရင်တော့ Sync လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကို New Start လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ..။ ဒါဆို Gmail app ထဲမှာ ကိုယ်နံနက် email တွေဖတ်လို့ရမယ်ပေါ့။ အဲသည်နှစ်ခုကို နေ့စဉ်လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ 😀 😀
All Rest ဆိုတဲ့ဟာအတွက် Condition က Timer ရွေးပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ည ၁၁ နာရီထိုးတိုင်း ကျနော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်သုံးခုကို လုပ်ခိုင်းတာပါ။ Set Time မရွေးတာက လုပ်ချင်တဲ့ အရာမတူလို့ပါ။ ည ၁၁ ကနေ မနက် ၅ ကြား Airplane လုပ်ထားပါဆိုရင် Timer ရွေးလို့ရပါတယ်။ ၅ နာရီကျော်ရင် အလိုလို ဖုန်းလိုင်းပြန်တက်မှာပါ။ Task လဲ တစ်ခုထဲလုပ်ထားပေးရင်ရပါပြီ။ အခုဟာက ည ၁၁ မှာလုပ်ချင်တဲ့ Task နဲ့ မနက် ၅ မှာ လုပ်ချင်တဲ့ Task မတူတာတွေပါတော့ Task နှစ်ခုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်ပေးရတာပါ။ ဒါကတော့ မိမိစဉ်းစားတဲ့ Logic ပါပဲ။ Set Time က ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ကြား ဒါကိုလုပ်နေလိုက်ပါ သဘောမျိုးပေါ့။
ဘယ်အခြေအနေမှာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Condition ကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ Repeat နေရာတော့ နေ့တိုင်းလုပ်ချင်လို့ Every Day လို့ပဲထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ပုံမှာ ပါပါမယ်။
ဘာလုပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ Action ကို သတ်မှတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်ချင်းတော့ မှန်အောင်စီနှိပ်ပေါ့။ ကိုယ်နှိပ်တဲ့ Order အတိုင်းလုပ်ပါတယ်။ အထက်အောက်ဘယ်လိုတွေပဲပြနေပေမယ့် ကိုယ်နှိပ်ရွေးသွားတဲ့အတိုင်း 1,2,3 အစဉ်တိုင်းလုပ်ပေးသွားတာပါပဲ။
ပြီးရင်တော့ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ Task လေးရပါပြီ။ ON ထားလိုက်နိုင်ပါပြီ။
ဒါဆိုရင် အောက်ကအတိုင်း နံနက် ၅ နာရီမှာ အလိုလိုအလုပ်လုပ်ပေးဖို့ အောက်က Task လေးရအောင် လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူပါတယ်။ မိမိဖာသာ Try ကြည့်ပါ။ 😀
အလုပ်မလုပ်စေချင်တဲ့ Task ကို Switch OFF ထားနိုင်သလို ဖိထားရွေးပြီးလဲ ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် MIUI မှာပါတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မိမိတို့စိတ်ကူးရှိလုပ်ချင်တာလေးတွေအဆင့်ဆင့်ကို ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဖုန်းမှာ ဝင်ရောက်ပြုပြင်ပေးထားလေးတွေ လုပ်တတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
MIUI Fans များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ.. 🙂 🙂